Qoomiyada Canfarta ee Dalka Itoobiya oo Dagaalo Xoogan kuso qaaday degaanka Ismaamulka Somaalida Itoobiya iyo degaano dhawr ah oo ay la-waregeen. | Mandheera News
Qoomiyada canfarta oo ka mida qoomiyadaha Dalka Itoobiya kuwa ugu tirada yar aya waayahan danbe Dagaalo xoogan oo is-daba jooga ah ku haysa Somaalida degan gobolka is-maamulka Somaalida degan kilalka Shanaad ee Itoobiya oo ay xuduud wadaag-yiin.
Dagaaladi u danbeeyay oo manta ay canfarta Itoobiya kuso qaaday degaan Somaalida Itoobiya aya lagu so-waramaya inay Ahayeen kuwi ugu cusla ee dhex-mara labadan qoomiyadood ee canfarta iyo somaalida.
Gobolka Siti ee Ismaamulka Somaalida Itoobiya ayay Ciidamada Liyuu-booliska Canftarta iyo Ciidamo maleeshiyo canfar ahi weeraro culus kuso qadeen’iyago la-wareegay degaano dhawr ah oo ka mida degaanka Somaalida ee gobolka Sita.
Wararku waxay inta ku darayaan in dagaalkan u dhaxeeya canfarta iyo Somaalida Itoobiya inay sababeen dhimasho iyo dhaawac badan oo Aan tiradooda si rasmiya imika lo-sugi karin madaama oo dagaaladu socdeen ila gelinki danbe manta oo Isniin Ahayd.
Wararku waxay inta ku darayaan in ciidamada Liyuu-booliska ee Ismaamulka kilalka Shanaad ee Itoobiya ay ka gaabsadeen inay dagaalka Qoomiyada canfartu kuso qaaday shacabka Somaalida ee Gobolka Siti ay ka qab-galaan Isla-markaan ila hada u dagaalku u dhaxeeyo dadka degaanka Somaalida Gobolka Siti oo kali Ah iyo Ciidamada Liyuu-booliska Canfrata iyo Maleeshiyo beleedka canfarta oo is garab sanaaya.
Si dhab ah Loma xaqiijin karo ila hada sababta ay Ciidamada Liyuu-booliska Ismaamulka Somaalida Itoobiya uga difaaci-waayay Ciidamada Liyuu-booliska Canfarta iyo maleshiyaadka is-garabsanaaya ee dagaalka kuso qaaday Somaalida killalka shanaad ee Itoobiya Gaar-Ahaan gobolka Siti.
Dagaalo dhawaan dhex-maray canfarta iyo Somaalida ayaa Ciidanka Canfartu waxay dileen Ciidamo kuwa Liyuu-booliska Somaalida ah iyago kuwa kalana dhaawac ku kaxaystay Isla-markaana Ciidanka Canfartu muqaalo kaso duubay ay ku jil dilayaan Ciidamada ay dhaawaca ku kaxaysteen ee Ahaa ciidamada Liyuu-booloska Somaalida Itoobiya.
Ciidamada Fadaraalka dawlada Itoobiya ay uso dirtay Xuduuda u dhaxaysa Somaalida iyo Canfarta si ay u kala ilaaliyaan labada dhinac ee Dirirtu u dhaxayso ayan waxba ka qaban Colaada u dhaxaysa Canfarta iyo Somaalida Itoobiya oo dagaalada u dhaxeeya so noq-noqdeen.
Somaalida iyo Canfarta Itoobiya aya Maamuladoodu tageero u muujiyeen Dawlada Fadaraalka Itoobiya ee uuhogaamiyo Abiy Ahmed oo dagaal kula jirta Xoogaga Tigirayga ee waqooyiga Itoobiya.